China Bed Western Style Ugboro abụọ Solid Wood Bed Bed Bed Bed # 0109 Manufacture and Factory | Yamazonhome
Westernlọ Ime Ọdịda Anyanwụ Dị Mgba Ugboro abụọ Bed Bed Bed Bed # 0109
Aha: Osisi ndina siri ike
Nọmba nlereanya: Amac-01 09
Nha: 1850mm * 2055 * 865mm
Ebe kwesịrị ekwesị: ụlọ ndina, Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ, Ọmụmụ ihe
Akwa akwa osisi niile
Nhọrọ nke nnukwu oak na-acha ọcha nwere oke ike na-ebu ikike na ike ijide ntu karịa osisi ndị ọzọ. Otu osisi oak nke otu nkọwapụta ahụ nwere ike ịkwado ọhịa abụọ. O ji osisi oak wee buru oke ibu. O siri ike ma mara mma, ahụike na gburugburu ebe obibi, na-enweghị nchegbu gbasara nsogbu isi, na ọrụ siri ike, Nwere ike iburu ibu nke ụmụ nwoke 8 toro eto.
Humanized backrest imewe
Ejiri osisi siri ike mee isi ya, jiri ederede doro anya na nkwụsi ike siri ike nke akwa. Emebela akụkụ imewe ka ọ dị na arc, yana atụmatụ chiri anya na-eme ka ọ nwekwuo ntụsara ahụ. Ọdịdị nke arịa ụlọ ga-esite na ahụ mmadụ, ma e jiri ya tụnyere ihe kwụ ọtọ, Usoro ebumpụta ụwa nke dị nso na ahụ mmadụ na-adị mma karị. Onye mmebe ahụ nakweere usoro imepụta "ụdị-ụdị" ahụ, site n'akụkụ nkuku, dabere na nnweta dị mfe, ịdị elu nke bed 30cm, wdg, nyocha ugboro ugboro, yana nkọwa nke ezi nkasi obi.
Umengwụ anya na azụ panel
E nwere nchekwa nchekwa dị n'azụ isi akwa akwa, nke enwere ike iji tinye akwụkwọ, iko mmiri, wdg, ma hazie ya na oghere mgbochi, nke dị mma maka ịkwanye, ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ekwentị gị ihe ndina. Ugboro abụọ ndu gburugburu gburugburu nke ihe ndina, jikọtara na a dị mfe ịma mma, emeghe Thewa na-ezo n'ime.
The osisi siri ike bed ahu adopts osisi siri ike ahiri ọkpụkpụ, nke na-Onweghị mkpụrụokwu ndokwa na elu njupụta nkesa, ike amị ikike na edo ike, mụ Ọdịdị, adịghị mfe daa. Ihe anyị wuru bụ akwa na-eku ume, ọkpọ nke ejiri osisi oak mee, na ikuku ikuku na-eku ume iku ume, belata mmetọ mmiri, ume ọhụrụ ma hie ụra abalị niile.
Free kenha uwe okporo ígwè
Footkwụ ihe ndina ahụ nwere ike iji mkpara ụkwụ mee ihe kpamkpam, nke enwere ike itinye ya na akwa nke onwe, ịchafụ, wdg, dị mfe ma dị mma. Dị abụọ ahụ dabara adaba maka gị.
Obi ike mechie osisi akwa akwa ụkwụ
All akwa osisi bed, enweghị skinning usoro, ọ dịghị iche osisi plank, oké siri ike bed ụkwụ, kpọmkwem tilt n'akuku, anụ ibu amị, na-enye gị a zuru echiche nke nche. 17cm si n'ala, ala adịghị emetụ ala imewe, adaba Ọcha ihicha ma na-elekọta nke ala ohere.
Ihe ndina ime ụlọ nke oge a dị mfe
Ọ bụrụgodi na “Apụghị m” ịkekọrịta nsogbu ndị dị na ndụ maka gị
"M" naanị m nwere ike ịkpọrọ gị laa
Obi nwayọọ na-anọpụ iche ụda
Layerkwado ahụ wetara site na agba osisi mbụ
Ngozi ergonomic 103 nke isi akwa
Mee ka ike gwụ otu ụbọchị
Nke gara aga: Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Slider Door Wardrobe Bedroom Ngwa ụlọ # 0108
Osote: Unitarp sere n'elu inflatable Yoga ute okenye okenye Igba mmiri Pool Water Yoga Mats na Eva Non-ileghara Kedo akwa 0389
Multi-Ọtọ Single sofa Living Room Furnit ...
Dị Mfe Solid Wood Furniture for Dining Room Sid ...
Osisi Deluxe Villa Cat House na ihe owuwu ụzọ mbata na Ba ...